မောင်ပေးတဲ့ခွန်အားတွေ ကျွန်မသွေးကြောတွေထဲ စီးဝင်သွားတဲ့အခါ
မောင့်ကိုပေးဖို့ ခွန်အားတွေ ပိုလို့ အသစ်မွေးဖြစ်တယ်…
မောင်ပေးတဲ့သစ္စာတရားတွေ ကျွန်မနှလုံးသားထဲ ပျော်ဝင်သွားတဲ့အခါ
မောင့်အတွက်ကျွန်မသစ္စာတရားတွေ ပိုလို့ အမြစ်ခိုင်ကျန်းမာသန်စွမ်းကြတယ်…
မောင်ပေးတဲ့နားလည်မှုတွေ ကျွန်မနေ့ ရက်တွေထဲ ပေါင်းစည်းသွားတဲ့အခါ
မောင့်နေ့ ရက်တွေထဲ ကျွန်မနားလည်မှုတွေ ပိုလို့ စဉ်ဆက်မပြတ် စီးဆင်းသွားတယ်…
မောင်ပေးတဲ့အေးမြမြမေတ္တာတွေ ကျွန်မကိုယ်ထဲ စိမ့်ဝင်သွားတဲ့အခါ
မောင့်ကိုယ်ထဲ ကျွန်မမေတ္တာတွေ ပိုလို့ ပေါများဖိတ်လျံလို့ သွားတယ်…
ကျွန်မဖြစ်တည်မှုအတွက် မောင်ကနဘေးမားမားရပ်လို့ နေတယ်…
(ချစ်ခင်ပွန်း=ချစ်သူငယ်ချင်း=ချစ်လေးလေး=မောင့်မွေးနေ့ အမှတ်တရ နှလုံးသားနှင့် ရေးဖွဲ့ သည်)
Posted by တန်ခူး at 4:23 PM 17 comments:
တို့ ခေတ်နဲ့သူတို့ ခေတ်
“ဒီနေ့ တော့လေ… မင်းနဲ့ ချိန်းထားတယ်……ချက်တင်ထဲမှာတွေ့ ဖို့ ကွယ်
ချက်တင်ထဲမှာ ပို့ လိုက်မယ်…
ခံစားနားဆင်ရင်းဝေဖန်ပေးကွယ်… တွေးရင်းနဲ့ရင်ခုန်မိတယ်”
“ချက်တင်ထဲမှာ… တွေ့ ကြမယ်… စကားပြောကောင်းတဲ့ကောင်မလေးရယ်
အပေါ်က သီချင်းလေး နာမည်က “ချက်တင်ထဲကကောင်မလေး” တဲ့..။ ကျွန်မမောင်လေးဝမ်းကွဲ တယောက်က သီချင်းလေးတွေ နားထောင်ဖို့ ဆို အီးမေးလ်ပို့ လိုက်တာ နားထောင်ရင်း ဒီသီချင်းကျတော့ ကျွန်မတယောက်ထဲ ပြုံးမိပါတယ်။ ဒီခေတ်ကလေးတွေဆို အတော်ကို ရင်ခုန်လှုပ်ရှားစေမယ့် သီချင်းလေးပါ။ နားထောင်နေတဲ့ ကောင်မလေးက သူနဲ့ ညတိုင်း ချက်တဲ့ ကောင်လေးကို မှန်းဆတွေးပြီး ရင်တွေတဖျတ်ဖျတ်ခုန်နေမှာ ဖြစ်သလို နားထောင်နေတဲ့ကောင်လေးကလဲ သူနဲ့ ချက်တင်လုပ်ရတာ ဟာမိုနစ်ဖြစ်တဲ့ကောင်မလေးကို သတိရရင်ခုန်နေမှာ အမှန်ပဲ။ ဒီလောက် ရင်ခုန်စရာကောင်းတဲ့ သီချင်းလေးကို ကျွန်မက ဘာလို့ ပြုံးပြုံးကြီး နားထောင်နေမိပါလိမ့်။ နောက်ဆက်တွဲ တွေးမိသွားတာက… အော်.. ငါတော်တော် အဖွားကြီးဖြစ်သွားတာပဲ ဆိုတာပါ။
လွန်ခဲ့တဲ့ ၄နှစ်လောက်က ကျွန်မ ဟိုအရင်အလုပ်က လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် ကောင်မလေးတယောက်ရဲ့ မင်္ဂလာဆောင်သွားတော့ သူတို့ စတွေ့ ပုံလေးကို စလိုက်ရှိုးလေးနဲ့ ပြတဲ့အခါ သူတို့ ဇာတ်လမ်းလေးက ချက်တင်က စတယ်ဆိုတာ သိခဲ့ရပါတယ်။ အဲဒီတုန်းက ကျွန်မအတွက် အတော်ကို ထူးဆန်းခဲ့တာပါ။ ဘယ်နှယ့် တယောက်နဲ့ တယောက် မမြင်ဘူးကြပဲ သံယောဇဉ်တွေ အရင်တွယ်သွားကြတာလဲပေါ့။ ကံကောင်းလို့၂ယောက်လုံးချောချောလေးတွေ ဖြစ်နေကြလို့ …တကယ်လို့ချက်တင်ထဲတွေ့သံယောဇဉ်တွယ်မိတဲ့သူက အိမ်ထောင်ရှိနေရင်ဘယ်လိုလုပ်… မရိုးသားတဲ့သူဖြစ်ရင် ဘယ်လိုလုပ်… စသဖြင့်ပေါ့… ။ နောက်ပိုင်းကျတော့ အဲဒီလို မင်္ဂလာဆောင်တွေ သွားရစိတ်လာတော့ ချက်တင်ဇာတ်လမ်း… အွန်လိုင်းဇာတ်လမ်းတွေနဲ့ က နဲနဲယဉ်လာပါတယ်။ အဲဒီတော့မှ တချို့ တွေက ချက်တင်ထဲမှာ စကားပြောဆိုကြည့်… စကားပြောရတာ အဆင်ပြေရင် လူချင်းတွေ့ ဖို့ ချိန်း… သူရောကိုယ်ရော ကြိုက်လို့ ရလောက်ရင် ကြိုက်လိုက်ကြဆိုတာ ကျွန်မ သဘောပေါက်လာပါတယ်။ တခုပါပဲ… ကျွန်မက စာရေးတာ ၀ါသနာပါသူ။ သူများဇာတ်လမ်းတွေကို ပူးဝင်ခံစားတတ်သူ။ တချို့ တကယ့် အဖြစ်အပျက်လေးတွေ ကောင်မလေးနဲ့ ကောင်လေး သိပ်ချစ်ကြတဲ့ အကြောင်းများကြားရရင် ကိုယ်ပါရောရောင် ရင်တွေခုန်ပြီး စာတွေရေးချင်စိတ်တဖွားဖွား ပေါ်လာတတ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်… ဒီချက်တင်ဇာတ်လမ်းတွေကတော့ ကျွန်မရင်ထဲသိပ်မတိုးလှပါဘူး။ အဲဒါ ခဏခဏကြားဖူးနေတဲ့ generation gapဆိုတာ ဖြစ်မှာပါ။
ဟိုတနေ့ က ရုံးမှာ ကျွန်မရဲ့ ဂျူနီယာကောင်လေးနဲ့musicအကြောင်းပြောရင်း နင်ဂီတာတီးတတ်သလား မေးတော့ မတီးတတ်ပါတဲ့။ ကျွန်မက တို့ နိုင်ငံမှာ နင်နဲ့ ရွယ်တူကောင်လေးတွေ တော်တော်များများ ဂီတာတီးတတ်ကြတယ်လို့ ။ ကောင်မလေးတွေ အိမ်ရှေ့ က အုတ်ခုံလေးတွေမှာ ညညဂီတာတီးတဲ့ ယဉ်ကျေးမှုလေးက တို့ နိုင်ငံမှာ ရှိတယ်ဆိုတော့… သူက ကျွန်မကို ပြောပါတယ်။ ဘာလို့အချိန်ကုန် လူပင်ပန်းခံမလဲတဲ့… အိမ်ကနေ smsလေးပို့ လိုက် ဒါမှမဟုတ် အဲကွန်းခန်းထဲမှာ ချက်တင်ထဲက ရင်ဖွင့်လိုက် ရတာပဲတဲ့။ သူ့ အိမ်ရှေ့ သွားလို့သူ့ တွေ့ ရမတွေ့ ရ မသေချာဘူးတဲ့။ facebookပေါ်သွားရင် သူ့ ပုံလေးတွေ အိမ်ကနေ လှမ်းတွေ့ နေရတာပဲတဲ့။ ကျွန်မ ဘာမှ ပြန်မပြောနိုင်တော့ ပါဘူး။ အော်… သူတို့ ခေတ်က ဟုတ်သားလို့ ပဲ ခေါင်းငြိမ့်မိပါတော့တယ်။
ကျွန်မတို့ ခေတ်က ယောင်္ကျားလေးတွေ ခမျာ မိန်းခလေးတယောက်ကို ရဖို့ အတော်ကို လုံလစိုက်ထုတ် ကြိုးစားခဲ့ရတာပဲ။ ကိုယ်နေတဲ့မင်္ဂလာဒုံကနေ ကောင်မလေးရှိတဲ့ကျောက်မြောင်းကို လျှောက်ပြန်သံပေးလုပ်ကြရသလို… ညဖက်အတော်မိုးချူပ်တဲ့အထိ မိဘတွေ အဆူခံပြီး ကောင်မလေး အိမ်ရှေ့ မှာ သီချင်းသွားဆိုကြရသေးတာ။ တက္ကသိုလ်ရောက်လာတော့ ပိုးရပန်းရတာ လွယ်သွားပြီဆိုပေမယ့်လဲ အာအိုင်တီကနေ အတန်းတွေလစ် ဘတ်စ်ကားကျပ်ကျပ်တိုးစီးပြီး အာစီတူးထဲ ဒုက္ခခံရတာမျိုးကလဲ အများသားလေ။ ကျောင်းခေါ်ချိန်မပြည့်လို့တနှစ်အောက်ခံရတဲ့အထိ အချစ်သူရဲကောင်းတွေရှိလို့တူးတူးရဲ့ ၇၅ရာခိုင်နှုန်းသီချင်းတောင် အတော်ခေတ်စားလိုက်ပါရောလား။
ဟိုးအရင်က ဂီတာမတီးတတ်ပေမယ့် ကောင်မလေးရှိတဲ့ သဇင်ရှေ့ သီချင်းဆိုချင်လွန်းလို့လက်ဖျားတွေ အသားမာတတ်တဲ့အထိ ဂီတာကို ကြိုးစားပန်းစား သင်တဲ့သူတွေလဲရှိ။ ကျွန်မသူငယ်ချင်းတယောက်ဆို လာဆိုတဲ့သူတွေထဲ သူပါလို့ ကောင်မလေးသိရအောင် အဖွင့်သီချင်းလေးကို သူများနဲ့ မတူအောင် creative thinkingနဲ့ဆိုတတ်သူပါ။ (နေ့ တိုင်းအဖွင့်သီချင်းလေက ဖိုးချိုရဲ့ ရေလိုအေးလို့ပန်းလိုချမ်းမြေ့ပါစေတဲ့… ခုအဲဒီစုံတွဲလေးက အကြင်လင်မယားဖြစ်သွားပြီး သူတို့ မှာ ကျွန်မသားလေးနဲ့ရွယ်တူ သမီးလေးတယောက်ရှိနေပါပြီ)။ ကျွန်မ အမျိုးသား သူငယ်ချင်းတယောက်ဆို စာမေးပွဲတွင်းကြီး စာကျက်နေရင်း ကောင်မလေးကို လွမ်းလွန်းလို့ ပါဆို သူငယ်ချင်းတွေ ဂျီကျ ညဘက်ကြီး အဆောင်ရှေ့ ကို ဆိုက်ကယ်နဲ့ အသွား ဆိုက်ကယ်မှောက်တာ စာမေးပွဲကို တက္ကသိုလ်ဆေးရုံကနေ ဖြေလိုက်ရပါတယ်။ အချစ်ကြီးကြပုံများပြောပါတယ်။
ဒီကြားထဲ ကိုယ်ကြိုက်မိတဲ့သူက အရမ်းနာမည်ကြီးတဲ့ အလှဘုရင်မလို လူမျိူးဆို အပြိုင်အဆိုင်တွေ ကြားထဲ ကိုယ့်ကို ပန်းကုံးစွတ်အောင် လုံ့ လစိုက်ထုတ်ကြိုးစားကြပြီး နောက်ဆုံးဇွဲဆု ရသွားတဲ့သူတွေလဲ ရှိတတ်သေးတာမိုလား။ ဒီဘက်ခေတ်မှာ ချစ်သူများနေ့ ဆို အလှဆင်ပြီး လိုချင်စဖွယ်ဖြစ်အောင် လုပ်ထားတဲ့ ပန်းစည်းလေးတွေကို စီးပွားရေးသမားတွေက လာဘ်မြင်ပြီးရောင်းကြတယ်။ တချို့ ချစ်သူတွေက အွန်လိုင်းပေါ်ကနေ၀ယ်ပြီး ရောင်းတဲ့ဆိုင်ကို deliveryလုပ်ခိုင်းလိုက်တာ။ ပန်းစည်းလေးတွေ့ ရင် ခုန်ပေါက်ပျော်သွားကြတဲ့ ကောင်မလေးတွေတွေ့ တော့ ကျွန်မတို့ ခေတ်က ပိတောက်ပင်ထိပ်ဖျားက ဦးဦးဖျားဖျားပွင့်တဲ့ ပိတောက်ပန်းလေးကို ချစ်သူကို ပေးချင်လို့ကိုယ်ကိုယ်တိုင် အပင်ပေါ်တက်ခူးတတ်ကြသူတွေကို သတိရမိပါတယ်။
ကျွန်မစာဖတ်ပြီး လူငယ်လေးတွေက မတန်ခူးက တို့ ခေတ်က သူတို့ ခေတ်ထက် ပိုချစ်တတ်ကြတယ်လို့ဆိုလိုချင်တာလားလို့တလွဲမတွေးလိုက်ပါနဲ့ နော်။ ဒီဘက်ခေတ်က အချစ်ဇာတ်လမ်းတွေကို တွေ့ ရတော့ အံ့သြမိသလို တို့ ခေတ်က ဘယ်လိုများလဲဆိုတာ ဒီဘက်ကလေးတွေ အပျင်းပြေဖတ်ရအောင် ရေးလိုက်တာပါ။ Technologyတွေ စက္ကန့် မလပ် ပြောင်းလဲလာတဲ့ ခေတ်ကြီးမှာ mediaတွေကလဲ အမျိုးမျိုးပေါ်လာကြတော့ တို့ ခေတ်နဲ့ သူတို့ ခေတ်ကွာဟတာ တကယ်တော့လဲ မဆန်းလှပါဘူး။ Technology သိပ်မတိုးတက်သေးတဲ့ တို့ ခေတ်မှာ အတော်များများက manual တွေဖြစ်နေတော့ အချိန်အားလူအားတွေက ဒီဘက်ခေတ်ထက် ပိုသုံးကြရတာပါ။ ချစ်သူအိမ်ရှေ့ ညတိုင်းသွား ဂီတာတီးနေမယ့် အစား part timeသွားလုပ်လိုက်တာမှ ပိုက်ဆံမြန်မြန်စုနိုင်ပြီး ချစ်သူနဲ့ အမြန် အတူနေနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ လက်တွေ့ ကျတဲ့ အတွေးတွေကို သူတို့ ခေတ်မှာ ပိုတွေးတတ်လာကြတာပါ။ အဲဒါမှလဲ တိုးတက်တဲ့ ခေတ်နောက် ကောက်ကောက်ပါအောင် လိုက်နိုင်တော့မှာ မိုလား။ ကျွန်မသားတို့ ခေတ်ကြတော့ ဘယ်လို mediaတွေ ထပ်ပေါ်ပြီး ဘယ်လို ခေတ်ပေါ်ဇာတ်လမ်းမျိုးလေးတွေ တွေ့ ရမလဲဆိုတာ ကြိုတင်မမှန်းဆနိုင်လောက်အောင်ပါပဲ။
Posted by တန်ခူး at 3:26 PM7comments:
သားလေး ကျောင်းကြီးစတက်ရတော့မယ်ဆိုတော့ ကျောင်းဝတ်စုံအသစ်လေးကို ပြင်ဆင်ပေး၊ ကျောင်းလွယ်အိတ်လေး ပြင်ဆင်ပေးနဲ့ကာယကံရှင်သားတော့ မသိ… သားမေမေကျွန်မကတော့ ရင်ခုန်လို့ နေခဲ့တယ်။ မူလတန်းကျောင်းဆိုတာ အရင်က မူကြိုလို မဟုတ်တော့ သားလေး ပတ်ဝန်းကျင်အသစ်မှာ စည်းကမ်းတွေနဲ့နေသားကျမှ ကျပါ့မလားလို့စိတ်ပူရတာက တမျိုး။ မူကြိုတုန်းက ကျွန်မရုံးထဲမှာ ရှိတဲ့ကျောင်းဆိုတော့ သားပစ္စည်းတွေကို နေရာချ၊ ပြန်ယူတာတွေ အားလုံး ကျွန်မပဲလုပ်တာမို့ကျောင်းကြီးမှာ ကိုယ့်ပစ္စည်းကိုယ် ထိန်းသိမ်းနိုင်အောင် သားကို တတွတ်တွတ်မှာရသေးတယ်။
သားရဲ့ ပထမဆုံးကျောင်းသွားတဲ့နေက ကျွန်မလိုက်လို့ ရတာမို့သားနဲ့ အတူကျောင်းကို လိုက်ရင်း ကိုယ်ငယ်ငယ်က ပထမဆုံး ကျောင်းတက်ရတဲ့နေ့ ကို အမှတ်ရနေမိသေးတယ်။ ကျွန်မဖေဖေရဲ့ မောရစ်အိတ်လို့ ခေါ်တဲ့ အတော်ရုပ်ဆိုးတဲ့ လမ်းလယ်ခေါင်ခဏခဏ ဂေါက်လှည့်ရတဲ့ ကားစုတ်စုတ်လေးပေါ်မှာ အဖြူအစိမ်းကျောင်းဝတ်စုံနဲ့ရှုးဖိနပ်အနက်ရောင် ခြေအိတ်ဖြူဖြူ လွယ်အိတ်နီနီလေးနဲ့ရင်ခုန်နေခဲ့တဲ့ အချိန်လေးကို ကျွန်မခုထိမှတ်မိနေတာ အံ့သြစရာပါ။ အမှတ်(၂) အစိုးရအထက်ကျောင်း လသာ ဆိုတဲ့ အုတ်နီနီကျောင်းကြီးကို အတွေ့ မှာ အရာအားလုံးကို မေ့ပြီး လိုက်ပို့ တဲ့ အဖေအမေတောင် ပြန်စောင်းမကြည့်ပဲ လွယ်အိတ်လေးလွယ်ပြီး ခုန်ပေါက်သွားခဲ့တဲ့ ကလေးမလေးဟာ ကျွန်မပဲပေါ့။ အဲဒီလို မူလတန်းကျောင်းသူ ပထမနေ့ ကတည်းက ကျောင်းပျော်ကျွန်မ အာအိုင်တီရောက်တဲ့အထိ နေမကောင်းတောင် အိပ်ရာက လူးလဲထပြီး ကျောင်းသွားတတ်တာပါ။ သားလေးက ကျွန်မနဲ့ တူရင်တော့ ကျောင်းပျော်ကောင်းပါရဲ့။
ကျောင်းရောက်တော့ ကျောင်းသားဟောင်းကြီး တယောက်လို ခပ်တည်တည်နဲ့ပထမနေ့ မှာပဲ နေသားကျသွားတဲ့ သားကို ကြည့်ပြီး ကျွန်မစိတ်အေးရပါတယ်။ စိတ်ရှည်အေးဆေးပုံရတဲ့ သားအတန်းပိုင်ဆရာမလေးကို တွေ့ တော့ သိပ်စိတ်မပူတော့ပါဘူး။ ကျွန်မရော ကျွန်မအမျိုးသားပါ ဆရာတွေကို ရိုသေလေးစား ဆရာ့ကျေးဇူးကို ဦးထိတ်ထားပြီး ဆရာတွေလိုရင် အမြဲအဆင်သင့်ဖြစ်နေလို့ လားမသိပါဘူး။ သားလေးက အမြဲဆရာကောင်းနဲ့ တွေ့ တတ်ပါတယ်။ ကျွန်မတို့ ပြုတဲ့ ကုသိုလ်က ဒီဘ၀တင် သားကို အကျိုးပေးတာ အံ့သြစရာပါ။
ဒီနိုင်ငံကကျောင်းတွေမှာ ပထမတန်းကျောင်းသားတွေကို ဒုတိယတန်းကျောင်းသားလေးတွေက ၃ရက်တိတိ လမ်းညွှန်စောင့်ရှောက်ပေးပါတယ်။ သားကို စောင့်ရှောက်ဖို့ တာဝန်ကျတဲ့ ကလေးလေးက အလွန်စိတ်ရှည်တဲ့ လူလိမ္မာလေးပါ။ အကိုကြီးတယောက်လို သားကို မုန့် ဈေးတန်းလိုက်ပို့ဆိုင်တွေလိုက်ပြပေးနေတာကို မိဘတွေ လှမ်းငေးရတဲ့နေရာကနေ ကျွန်မဓာတ်ပုံတွေရိုက်ရင်း အလုပ်တွေရှူပ်လို့ ပေါ့။ ထမင်းကြိုက်တဲ့သားက ထမင်းတပွဲ၊ မိုင်လိုတခွက် နဲ့သူရဲ့ပထမဆုံး ၀ယ်စားရတဲ့ ထမင်းတနပ်ကို မြိန်ရေလျက်ရေနဲ့ ။ ပထမဆုံးနေ့ ဟာ ကျွန်မထင်ထားတာထက် ချောမွေ့ နေတော့ စိတ်သိပ်ကြီးမပူမိတော့ပါဘူး။
မူလတန်းမှာ ကလေးတွေကို ပိုက်ဆံသုံးခွင့်ပေးကို ပေးရပါတယ်။ သားကို ကျွန်မ တနေ့ မုန့် ဖိုး ၁ကျပ်ခွဲပေးလိုက်ပါတယ်။ သားဘာတွေများစားနေလဲ စိတ်ပူမိပေမယ့် မေးလိုက်ရင် ထမင်းဆိုင်က ထမင်းတပွဲ ၁ကျပ်နဲ့မိုင်လိုတခွက် ပြား၄၀… နေ့ တိုင်း ဖေါ်မြူလာတခုလို ဒါပဲစားတာမို့ကျွန်မရောအမျိုးသားပါ ပြုံးမိပါတယ်။ ပိုတဲ့ ဆယ်ပြားကို စုဘူးထဲထည့်ပေါ့။
တလလောက်ကြာတော့ ကျောင်းကအပြန် မြန်မာနိုင်ငံအလံ(အလံဟောင်း) MYANMAR လို့ ရေးထားတဲ့ ခဲဖျက်လေးကို ပြပါတယ်။ သူ့ မုန့် ဖိုးပိုတဲ့ ၁၀ပြားနဲ့ ပထမဆုံး ၀ယ်တဲ့ ကျောင်းသုံးကိရိယာလေးက မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ ဆိုင်တာလေးဖြစ်နေတာ ကျွန်မဖြင့် အံ့သြ၀မ်းသာလို့ ။ အဲဒီကစလို့တချို့ နေ့ တွေမှာ ပိုက်ဆံ၁၀ပြားက စုဘူးထဲရောက်၊ တချို့ နေ့ တွေမှာ စိတ်ကူးပေါက်တဲ့ စာရေးကိရိယာလေးတွေ ၀ယ်နဲ့ ဟုတ်လို့ ပေါ့။
တနေ့ မတော့ ကျွန်မရုံးမှာ အစည်းအဝေးလုပ်နေတုန်း သားတရုတ်ဆရာမက ဖုန်းဆက်လာပါတယ်။ သားဆယ်ပြားစေ့မြိုချမိလိုက်လို့ တဲ့။ ကျွန်မအပူက ငယ်ထိပ်အထိရောက်သွားပါတယ်။ ဘယ်သူနဲ့ မှလဲ စကားမပြောနိုင် ဘာလုပ်ရမှန်းမသိနဲ့သားအဖေဆီဖုန်းဆက်ပြီး သားကို သွားခေါ်ခိုင်းမိပါတယ်။ ကျွန်မရုံးက သားကျောင်းနဲ့ ဝေးတာမို့ဆေးရုံပဲ တန်းသွားမယ်ပြောပြီး ဘုရားစာတွေ ဟိုရောက်ဒီရောက်ဆိုရင်း ကျွန်မတကိုယ်လုံး မိခင်တယောက်ရဲ့အပူတွေ မီးဟုန်းဟုန်းတောက်လို့ ။ သားကိုတွေ့ လိုက်ရတော့ သားက မျက်နှာလေးဇီးရွက်လောက်လေးသာ ရှိပါတယ်။ လူကတော့ ဘာမှမခံစားရတဲ့ပုံပါ။ အရေးပေါ်ဆီသွားရင်း သားကို ဓာတ်မှန်ရိုက်ရမယ် ဆယ်ပြားစေ့က အစာအိမ်ထဲရောက်ရင် အီးအီးထဲပါသွားမှာမို့ဘာမှ စိုးရိမ်စရာ မရှိဘူးလို့ဆရာဝန်မ ပြောတာကို သားက နားထောင်ပြီး ဇီးရွက်လောက်ရှိတဲ့မျက်နှာက နဲနဲလေးကြီးပြီး နဲနဲလေး ပြန်လန်းလာပါတယ်။ ဆယ်ပြားစေ့ကို အမှတ်တမဲ့ ပါးစပ်ထဲ ဟိုပို့ ဒီပို့ဆော့ရင်း ၀င်သွားတော့ ကြောက်လန့် ပြီး မြိုချလိုက်တာပါတဲ့။ ဒီအသက်အရွယ်ရောက်မှတော့ အဲလိုဖြစ်မယ် မထင်တော့ သတိမပေးမိတဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသာ အပြစ်တင်မိပါတော့တယ်။
ပထမဓာတ်မှန်ရိုက်တော့ ဆယ်ပြားစေ့မတွေ့ ဘူးဆိုလို့ကျွန်မတို့ အတော်ပြာသေးပါတယ်။ နောက်မှ ဓာတ်မှန်ရိုက်တဲ့သူက အဖြူရောင်ဝိုင်းဝိုင်းကို ဓာတ်မှန်ရဲ့ချို့ ယွင်းချက်ထင်ပြီး ဖြတ်ထုတ်လိုက်လို့ ပါတဲ့။ အစာအိမ်ထဲမှာ ဆယ်ပြားစေ့ဝိုင်းဝိုင်းလေးတွေ့ ရမှ ဟင်းချနိုင်ပါတော့တယ်။ ဆရာဝန်မက ဘယ်လမ်းကြောင်းကနေ အီးအီးထဲပါသွားမယ်ဆိုတာရှင်းပြတော့ သားက သေချာနားထောင်နေပြီးမှ စိတ်အေးသွားတဲ့ပုံနဲ့ဟီးဟီးဟားဟား လုပ်နိုင်ပါတော့တယ်။ ၃ရက်ဆိုအီးအီးထဲပါမယ်ဆိုတာနဲ့ကျွန်မလဲ ရုံးက ခွင့်ယူပြီး ဆယ်ပြားစေ့မထွက်မချင်း အီးအီး research လုပ်ရပါတော့တယ်။ ၄ရက်အထိ အီးအီးထဲ မပါတော့ တနေရာများ ကပ်နေသလား စိတ်ပူပြီး ဆေးရုံပြေး၊ ဓာတ်မှန်တခါရိုက်ရပြန်ပါတယ်။ အူမကြီးထဲဆယ်ပြားစေ့လေးတွေ့ မှ နဲနဲစိတ်သက်သာရပြန်တယ်။ ဒီတခါတော့ ဆေးရုံက ၀မ်းချူပြီး အမြန်ထွက်အောင် လုပ်ပေးပါတယ်။ ကျောင်းက ဆရာမတွေကလဲ တနေ့ တနေ့ဆယ်ပြားစေ့ထွက်ပလား ဖုန်းဆက်မေး၊ အသိတွေကလဲ ဖုန်းဆက်မေးနဲ့ရပ်ကျော်ရွာကျော် ဆယ်ပြားစေ့ပြဿနာပါ။ သားမလဲ တနေ့ တနေ့သူ့ ကို ၀ယ်ပေးထားတဲ့Head to Toeဆိုတဲ့ စာအုပ်ထဲက အစာအိမ်ဖွဲ့ စည်းပုံကို ကြည့်ပြီး သူ့ အဒေါ်ကို ဒီနေ့ ဆို သူ့ ဆယ်ပြားစေ့က ဒီလောက်ရောက်ပြီဆို မှန်းဆရတာ အမောပါ။ နောက်ဆုံး ငါးရက်မြောက်နေ့ မှ ဆယ်ပြားစေ့က အောင်မြင်စွာထွက်ပါတော့တယ်။
အရောင်တောင်ပြောင်းနေတဲ့ ဆယ်ပြားစေ့ကို သားကို ပြရင်း ထပ်ခါထပ်ခါ သတိပေးရပါတယ်။ ကျွန်မမှာတော့ မအိပ်နိုင် မစားနိုင်နဲ့ဆယ်ပြားစေ့ဖိုဘီးရားရောဂါစွဲကပ်သွားခဲ့ပါတယ်။ သားကို အကြွေစိမုန့် ဖိုး ခုထိမပေးဖြစ်တော့ပါဘူး။ ကျွန်မအမျိုးသားကတော့ ကျွန်မလုပ်ရပ်ကို မှားတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ တသက်လုံး ပိုက်ဆံမပေးသုံးနေတော့မလားတဲ့။ မိခင်တယောက်ရဲ့ စိုးရိမ်လွန်မှုပဲဆိုပါတော့လေ။ ကျွန်မသားကို အဲဒီကစလို့ထမင်းဗူးထည့်ပေးပြီး လိုလိုမယ်မယ်ဆို ၂ကျပ် ကျပ်တန်လေးပဲ ပိုက်ဆံအိတ်ထဲ ထည့်ပေးမိပါတော့တယ်။ ဒါကတော့ သားရဲ့ ပိုက်ဆံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ကျောင်းအတွေ့ အကြုံပါ။
စာမရေးဖြစ်တော့ ရေးဖို့ စုထားတဲ့ သားအကြောင်းတွေက ခပ်များများပါ။ ပို့ စ်ကြီး အရမ်းရှည်ရင် ဖတ်ရတာ ငြီးငွေ့ မစိုးလို့စိတ်ကူးရရင် ရသလို အပိုင်းလေးတွေ ခွဲရေးပါ့မယ်။ ကျွန်မရဲ့ လေနုအေးဘလော့လေးရဲ့ flavor တခုက သားပါဆိုတာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတောင် သတိမထားမိခဲ့ပါဘူး။ ဘလော့ရေးတာပြတ်သွားတော့ ပွဲတောင်းကြတာက သားအကြောင်းဖြစ်နေကြပါတယ်။ လေနုအေးနဲ့ သားကို တွဲမြင်နေကြတာ သိရတော့ ကျွန်မကြည်နူးမိပါတယ်။ တချို့ ကျွန်မဘလော့ကို လာလည်နေကျသူတွေဆို တန်ခူးထက် သားကို ပိုစိတ်ဝင်စားကြပါတယ်။ သားကို တခါမှမမြင်ဖူးတဲ့သူတွေတောင် အပြင်မှာ တွေ့ ရင် သားနဲ့ အတော်ရင်းနှီးနေကြပါတယ်။ ဒါဟာ မိခင်ဘလော့ဂါတယောက်က သားကို ပေးတဲ့လက်ဆောင်တခုလို့ ပဲ ဆိုရမလိုပါပဲ။ သားကြီးလာရင်ဖတ်ဖို့မေမေရေးတဲ့ သားရဲ့မှတ်တိုင်လေးတွေပေါ့။
Posted by တန်ခူး at 5:24 PM 13 comments:
ဒီနေ့facebookပေါ် ၀င်တော့ ကျွန်မဘလော့က ပို့ စ်လေးဖြစ်တဲ့ ကျွန်မသူငယ်ချင်း ကိုသျှားရဲ့ ကျောင်းကဗျာအရှည်ကြီးနဲ့အချစ်ရိုင်းတို့ အချစ်ဦး ပို့ စ်လေးကို စာချစ်သူ တယောက်က ဖြန့် ဝေထားတာ တွေ့ ရပါတယ်။ အဲဒီလိုတွေ့ ရတိုင်း ကျွန်မရင်ထဲမှာ ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ ၀မ်းသာပီတိဖြစ်မှုက ဘယ်လို ရေးပြရမှန်းကို မသိတာပါ။ ကျွန်မလို ဘာမှမဟုတ်တဲ့ ၀ါသနာအရ စာတိုပေစလေးတွေသာ ရေးတတ်တဲ့သူတယောက် အတွက် စာဖတ်သူကပေးတဲ့ အင်အားဆုလာဘ်တခုလို့မှတ်ယူမိပါတယ်။ ခုလို ကျွန်မပို့ စ်လေးကို တခုတ်တရ ဖြန့် ဝေပေးတဲ့စာချစ်သူတွေကို လေးလေးစားစား ကျေးဇူးတင်ကြောင်း ပြောချင်လို့ဒီပို့ စ်လေးကို ရေးလိုက်ရတာပါ။
ဟိုတလောက ကျွန်မဘလော့နဲ့အတော်ဝေးစဉ်ကာလကလဲ ကျွန်မကြည်ညိုလေးစားရတဲ့ ဦးကျော်သူအကြောင်း ရေးတဲ့ပို့ စ်လေးဖြစ်တဲ့ ကျွန်မ သို့ မဟုတ် ပြည်သူချစ်သောမင်းသား ပို့ စ်လေးကို ဦးကျော်သူရဲ့ facebookပေါ်မှာ ဓာတ်ပုံလေးတွေ ဝေေ၀ဆာဆာနဲ့တွေ့ လိုက်ရတော့ ရင်ထဲ အတိုင်းမသိကြည်နူးမိပါတယ်။ ကျွန်မရဲ့ ပို့ စ်လေးကို တင်ပေးတဲ့ ဦးကျော်သူadmin အဖွဲ့ နဲ့ကော်မန့် လေးတွေ အချိန်ပေးပေးသွားကြသူများကိုလဲ အရမ်းကို ကျေးဇူးတင်မိပါတယ်။
ဒီပို့ စ်နဲ့ အတူ ဟိုးအရင် ကျွန်မရေးခဲ့ဖူးတဲ့ RITကျောင်းသူ... သတိ…၁၂ဒေါ်လာ ပို့ စ်လေးတွေကို အီးမေးလ်နဲ့ဝေမျှပေးခဲ့တဲ့စာချစ်သူတွေကို ဘယ်သူဘယ်ဝါရယ်လို့မသိပေမယ့်လည်း ကျေးဇူးတင်ကြောင်း ဒီနေရာက ပြောပါရစေ။ ကျွန်မပို့ စ်လေးတွေကို ကျွန်မလင့်ခ်လေးထည့်ပြီး သူတို့ ဘလော့လေးတွေပေါ်မှာ ပြန်လည်ဝေမျှပေးကြတဲ့ ဘလော့ရောင်းရင်းတွေကိုလဲ ကျေးဇူးအထူးပါ။
အထူးတလည်ကျေးဇူးတင်မိသူတွေကတော့ ကျွန်မစာရေးကျဲလဲ ကျွန်မဘလော့လေးကို အချိန်မှန်လာဖတ်ကြတဲ့ ကျွန်မရဲ့ ဘလော့ရောင်းရင်းများ… ကျွန်မရဲ့စာဖတ်သူများ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီအားပေးမှုတွေကြောင့် ကျွန်မ စာရေးဖို့ပို့ စ်တွေမှန်မှန်တင်ဖို့အားသစ်တွေမွေးဖြစ်တာမို့ဒီပို့ စ်လေးနဲ့ကျေးဇူးမှတ်တမ်းတင်ပါရစေ။ စာတွေပုံမှန်ပြန်ရေးဖို့ကျွန်မကြိုးစားပါ့မယ်။
Posted by တန်ခူး at 11:47 PM4comments:
Midlife Crisis နဲ့ဘ၀လက်တွဲဖော်
ဒီပို့ စ်ကို ရေးချင်နေတာ ကြာပါပြီ။ ရင်ထဲမှာ ချရေးနေတာလဲ ကြာပါပြီ။ ဒီပို့ စ်ရဲ့ အကြောင်းအရာက sensitive ဖြစ်ပါတယ်။ သိလို့ တတ်လို့ရေးတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ရင်ထဲက ခံစားရတာလေးတွေ ပြီးတော့ မိသားစုတွေ မပြိုကွဲချင်တဲ့ စေတနာက အခြေခံလာတဲ့ ကျွန်မရဲ့ ကိုယ်ပိုင် အမြင်လေးကိုသာ ချရေးခြင်းပါ။ အမှားပါရင် နားလည်ပေးပါလို့ကြိုပြောပါရစေ။ ပို့ စ်ခေါင်းစဉ်ကို Midlife Crisis နဲ့ဘ၀လက်တွဲဖော်လို့ပေးထားရတာက ကျွန်မ ပြောချင်တဲ့Midlife Crisis က အိမ်ထောင်ရေးနဲ့ဆက်စပ်နေတာမို့ ပါ။ တခြား အခြေခံ အကြောင်းအရာတွေက မြစ်ဖျားခံလာတဲ့ Midlife Crisis မဟုတ်ပါဘူး။
“ကြားလား… ဟိုတယောက်သတင်းလေ… ဖြစ်မှာပေါ့ဟယ်… ဒီအရွယ်ရောက်တော့ တနေ့ တနေ့ဖြတ်သန်းနေရတဲ့ ခေါက်ရိုးကျိုးဘ၀ကြီး ငြီးငွေ့ ပြီး သူလဲ Midlife Crisis ရောဂါ ရသွားတာပေါ့… ခုတော့ အငယ်လေးရယ် အငယ်လေးနဲ့ ရတဲ့ ကလေးငယ်ငယ်လေးရယ်နဲ့ဘ၀ကို တစ်ကပြန်စနေလေရဲ့”
“ သူမိန်းမက ဘုရားတရားဘက်လိုက်တာကြာပြီလေ… မောင်နှမလို နေကြတာလဲကြာပြီတဲ့… ဒီတော့ ဒီကောင်ကြီးလဲ Midlife Crisisဖြစ်ပြီး စပွန်ဆာလေးနဲ့ တဲ့”
“တို့ သူငယ်ချင်းရဲ့ ယောင်္ကျားလေ… သူချစ်လို့ ယူထားတဲ့ မိန်းမကို ကလေး၂ယောက်ရမှ အချစ်စစ်မဟုတ်ဘူး… ဟာမိုနစ်မဖြစ်ဘူးဆိုပြီး… ဖေ့စ်ဘွတ်ပေါ်တွေ့ တဲ့ကောင်မလေး တယောက်နဲ့အတည်ယူတော့မလို့ တဲ့… အဲဒီ Midlife Crisisကြောက်လို့တို့ ကအပျိုကြီးလုပ်နေတာ”
အဲဒီအသံတွေထဲမှာ အိမ်ထောင်ရေး ဖောက်ပြန်မှုနဲ့ Midlife Crisis ဆိုတာကြီးက ရောနှောနေတယ်။ ဖောက်ပြန်တတ်သူတို့ ရဲ့ ဆင်ခြေပေးစရာ စကားလုံးလှလှတခုလို ဖြစ်နေတယ်။ တကယ်ပဲ Midlife Crisis ကြောင့်များ သူတို့ အိမ်ထောင်ရေးတွေ ပြိုကွဲသွားကြတာလားလို့တတ်နိုင်သလောက် ထဲထဲဝင်ဝင် လေ့လာကြည့်တော့…. အင်းးးးး…. ကျွန်မအမြင်အရတော့ ဘာမှအစရှာမရတာ အမှန်ပဲ။ ကာယကံရှင်တွေက တော့ ပိုသိပေလိမ့်ပေမယ့်… ကာယကံရှင်တချို့ နဲ့ပြောဆိုကြည့်တော့ သူကိုယ်တိုင်တောင် သူ့ အိမ်ထောင်ဘက် ဘာကြောင့် အဲလိုလုပ်သွားပါလိမ့်ဆိုတာ ခုထိ နားမလည်နိုင်သေး။
Midlife Crisis ဆိုတာကြီးကို အခွင့်အရေးတခုလို အသုံးချပြီး ရောဂါကျွမ်းပြီး ရလာတဲ့နောက်ဆက်ဆိုးကျိုးတွေက ကြောက်စရာပါ။ ကျွန်မ ပတ်ဝန်းကျင်က အသိမိတ်ဆွေတချို့ ရဲ့ ဖြစ်ရပ်မှန် ဥပမာတွေကို ကြည့်ပါဦး။
“အရင်ကတော့ လူတိုင်းက ရိုသေလေးစားရတဲ့ ရာထူးကြီးကြီး လူကြီးပေါ့… သားသမီးတွေနဲ့ မိန်းမက လက်မခံတော့ အငယ်အိမ်ဆင်း…. ခုတော့ ရာထူးကလဲပြုတ်… အငယ်ကလဲ သူ့ ကို လယ်စိုက်လုပ်ကျွေးရမယ်ဆိုလို့အသက် ၆၀ကျော်မှ လယ်စိုက်နေရတယ်တဲ့”
“ သူ့ ညာဘက်လက်က အလုပ်လုပ်လို့ မရတော့ဘူးလေ… အငယ်မိန်းမက သူ့ လိုချင်တဲ့ပိုက်ဆံရှာမပေးလို့ ဆို ညာလက်ကို ဓားနဲ့ မွှေထားတာတဲ့”
“ဆရာနောက်ဆုံးရက်တွေက ရင်နာစရာပါ… မိန်းမငယ်ငယ်လေးနဲ့ဆင်းရဲပြီး နောက်ဆုံး ဆေးမကုနိုင်လို့ ဆုံးရရှာတာတဲ့”
အသစ်အဆန်း အတွေ့ အကြုံတခုကို သစ်နေဆန်းနေတုန်းမှာတော့ မိုးမမြင်လေမမြင် ဒုက္ခကို ဟားတိုက်လို့ရပေမယ့်… မသစ်မဆန်းတော့တဲ့ အခါကျတော့ အေးအတူ အပူကျတော့ မမျှနိုင်တဲ့ ဘ၀လက်တွဲဖော်မဟုတ်တဲ့ သူတွေနဲ့ အနေကြာလာမှ ကြာကြာဝါးခါးမှန်းသိကြတဲ့ ဥပမာတွေက သင်ခန်းစာ ရစရာပါ။
တကယ်တော့… အိမ်ထောင်ဘက်ဆိုတာ ရင်ထဲက လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ ချစ်နေသူဆိုတာထက် အေးအတူ၊ ပူအမျှ ဘ၀သုခနဲ့ဒုက္ခတွေကို အတူလက်တွဲခံစားတဲ့ လက်တွဲဖော်ဆိုတာ ပိုမှန်ပါလိမ့်မယ်။ အိမ်ထောင်ပြုကြတယ်ဆိုတာလဲ ကိုယ့်နံဘေးမှာ ကိုယ်နဲ့ အတူ ကောင်းဆိုးမှန်သမျှ ဝေမျှခံစားဖို့အသင့်တော်ဆုံး အဖော်နဲ့လက်တွဲခြင်းပါ။ အသက် လေးဆယ်ကျော်မှ အိမ်ထောင်ပြုတဲ့ သူတယောက်ကို ဒီအသက်အရွယ်မှများ… ဆိုတဲ့ အဆိုးမြင်ဘက်ကနေ ကြည့် ကဲ့ရဲ့တင်းဆိုမယ့်အစား သူ့ အိမ်ထောင်ဘက်က သူ့ အတွက် ဒီအရာတွေ ပါရမီဖြည့်ပေးနိုင်တာကိုဆိုတဲ့ အကောင်းမြင်ဘက်က ကြည့်သင့်ပါတယ်။
ကိုယ့်အိမ်ထောင်ဘက်ကို ဘ၀လက်တွဲဖော် အဖြစ်မြင်ရင် … အဲလိုရဲဘော်ရဲဘက်စိတ်ရှိရင် Midlife Crisis ဆိုတဲ့စကားလုံးက ဟိုးအဝေးကြီးမှာပါ။ တနေ့ တနေ့ကိုယ့်မိသားစု စားဝတ်နေရေး… ကိုယ့်သားသမီးတွေရဲ့ ဘ၀ရှေ့ ရေး… ကိုယ့်နှစ်ဘက်မိဘတွေကို ပြုစုစောင့်ရှောက်ရေး… ဘာသာသာသနာရေးနဲ့စိတ်လေစရာ အချိန်ကို မရှိပါဘူး။ နီးခြင်းဝေးခြင်းကလဲ အကြောင်းပြစရာ အခွင့်ကောင်းတခုမဟုတ်ပါဘူး။ သားသမီးတွေ အရွယ်ရောက်လို့သိပ်အားလပ်နေတယ် ပိုက်ဆံတွေထားစရာမရှိအောင် ပိုလျှံနေတယ်ဆိုရင်လဲ ဘုရားသွားကျောင်းတက်.. ဘာသာ၊သာသနာအကျိုးထမ်းနေတာနဲ့မအားလပ်ပါဘူး။
Midlife Crisisဆိုတာကြီးက formula တခုမဟုတ်သလို၊ လူတိုင်းကြုံတွေ့ နိုင်တဲ့ ကူးစက်ရောဂါတခုလဲ မဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်မတို့ပတ်ဝန်းကျင်က Midlife တွေရဲ့ချစ်စရာမိသားစု ဥပမာလေးတွေက အများကြီးပါ။ စနေ၊ တနင်္ဂနွေဆို သားသမီးတွေကို ဘုန်းကြီးကျောင်းလိုက်ပို့ … အလှူအတန်းသွား… အားကစားအတူလုပ်… ဂီတသင်တန်းအတူတက်နဲ့ … ဘ၀ကို ဘ၀လက်တွဲဖော် မိသားစုတွေနဲ့ ပျော်ရွှင်စွာ ဖြတ်သန်းနေကြတဲ့ သူတွေကို ခုန Midlife Crisisလို့တတွင်တွင် အော်ပြီး အမှောင်ထဲမှာ ပျော်တတ်သူတွေကို လက်တို့ ပြချင်ပါတယ်။ တကယ်လို့ များ ရောဂါမရင့် သေးရင်… အချိန်မှီ အလင်းဝင်နိုင်အောင်ပါ။
ကျွန်မ ပတ်ဝန်းကျင်က Midlife အရွယ်လို့ပြောလို့ ရတဲ့ ကျွန်မသူငယ်ချင်းတို့မိသားစု သတင်းလေးတွေ facebook ပေါ်တွေ့ ရရင် အရမ်းကြည်နူးရပါတယ်။ အဖေရော... အမေပါ... ချစ်စရာသမီးလေး ၂ယောက်နဲ့အမြဲပျော်ရွှင်ကြည်နူးနေကြတဲ့ အတုယူစရာ မိသားစုလေးပါ။ အောက်ကပုံလေးကတော့ အကောင်းဆုံး ဥပမာလေးပေါ့။ သမီးလေးရဲ့ ကျောင်းက အဖေနဲ့ သမီး လုပ်ရတဲ့ Project လေး။ အဖေနဲ့ သမီး နှစ်ယောက်ပေါင်းဆွဲတဲ့ တီရှပ်ပန်းချီလေး။ တီရှပ်လေး ၂ခုပေါင်းမှ ပြီးပြည့်စုံတဲ့ပန်းချီကားလေးဖြစ်တာ။ ဘယ်လောက်လှတဲ့themeလေးလဲနော်။ မိသားစုတွေမှာလဲ အဲလိုပါပဲ။ အဖေက ကောင်းကင်ကြီး အမေက သက်တန့် ကြီး သားက သစ်ပင် သမီးလေးက ပန်းပွင့်လေး… ပေါင်းစုံလိုက်တော့ ကြည်နူးစရာ ပန်းချီကားချပ်လေး မဖြစ်လား။
ဘ၀လက်တွဲဖော်လက်များ ပိုလို့ ခိုင်မြဲပြီး မိသားစုများ ပြိုကွဲခြင်း ဒုက္ခမှ ဝေးကြပါစေ။
(ဓာတ်ပုံလေးတွေ သုံးခွင့်ပေးသော ချစ်သူငယ်ချင်းအား ကျေးဇူးအထူးပါ)
Posted by တန်ခူး at 2:31 PM 14 comments:
ဘလော့မရေးတာကြာတော့ ကီသွင်းတဲ့အနေနဲ့အပျင်းဖျောက်တဲ့အနေနဲ့ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ဒီပို့ စ်လေး တင်လိုက်တာပါ… ဒီအပတ် ချက်စားဖြစ်တဲ့ Sunday Menu လေးပါ…
Sunday မနက်စာ သားMenuကတော့ ham and egg sandwich ပါ… ကြက်ဥလေးတလုံး မကျက်တကျက်ပြုတ်… ချေထား…ပြီးတော့ hamလေးကို ပြုတ်… ပေါင်မုန့် လေးကို ထောပတ်သုတ်ပြီး … ကြက်ဥနဲ့ hamလေးညှပ်လိုက်တဲ့ အလွန်လွယ်တဲ့ သားအရမ်းနှစ်သက်တဲ့ မနက်စာပါ… ဓာတ်ပုံမရိုက်လိုက်မိပါ ဘူး… သားဖေဖေအတွက်တော့ နနွင်းဝါ၀ါ ပဲပြုတ်ထမင်းကျော်လေးရယ် ငါးခြောက်ဖုတ်လေးရယ် ဂေါ်ဖီလေးပါးပါးလှီး ကြက်သွန်နီလေးပါးပါးလှီး သံပုရာသီးလေး နဲ့ ဆားလေးဖြူးထားတဲ့ အချဉ်လေးနဲ့ ပါ… မြန်မာဆန်တဲ့ မနက်စာပေါ့….
နေ့ လည်စာကို ဘာချက်ရမှန်းမသိတာနဲ့မမိုရဲ့ အိမ်ရှင်မလက်ရာထဲက ပုဇွန်ရုံးပတီသီးမလေးဒညင်းသီး ချက်ဖို့့ရွေးချယ်လိုက်ပါတယ်…. ပြီးတော့ လွယ်လွယ်ကူကူ စားလို့ ကောင်းတဲ့ သားကြိုက်တဲ့ အာလူးကက်တလစ်လေးပေါ့….
တကယ်တော့ ပုဇွန်ရုံးပတီသီးချက်ကို မမိုဆီမှာ ဓာတ်ပုံလေးတွေ့ တာနဲ့ရမ်းသမ်းမှန်းချက်ကြည့်တာ သိပ်မဆိုးလှပါဘူး… မနက်ဈေးက ၀ယ်လာတဲ့ပုဇွန်စိတ်လေးတွေကို ဂျင်းကြက်သွန်ဖြူထောင်း အရည်ညှစ်…ငံပြာရည်…နနွင်းမှုန့် နဲ့ အရင်နယ်ထားလိုက်ပါတယ်… ပြီးမှ ရုံးပတီသီးလေးကို အနေတော်လှီး.. ခရမ်းချဉ်သီးလေး ခပ်ကြီးကြီးလှီး… မလေးဒညင်းသီးလေးရယ်… ကြက်သွန်နီခပ်ကြီးကြီးလှီးထားတာရယ် ပြင်ထားလိုက်ပါတယ်…
ဂျင်းကြက်သွန်ဖြူကို ဆီသတ်… ပုဇွန်ခြောက်မှုန့် လေးထည့်… ငါးပိလေးရယ်.. ငံပြာရည်…နနွင်းမှုန့် ..အရောင်တင်မှုန့် နဲ့ဆီသတ်ပါတယ်… ဆိုင်မဆိုင်တော့ မသိ…အနှစ်လေးရအောင် oyster sauce လေးနဲနဲ ထည့်ပါသေးတယ်… အနှစ်လေးမွှေးလာမှ ပုဇွန်လေးတွေ ထည့်ပြီး လုံးပါတယ်…
ပုဇွန်လေး အရောင်ပြောင်းလာတော့ အသင့်ပြင်ထားတဲ့ရုံးပတီသီး..မလေးဒညင်းသီး..ခရမ်းချဉ်..ကြက်သွန်နီတို့ရောလုံးပါတယ်… တကယ်တော့ ငရုတ်သီးစိမ်းလေးပါရင် အရသာက ပိုထိသွားမှာပါ… သားကိုကျွေးမှာမို့ ငရုတ်သီးစိမ်းမထည့်ဖြစ်တော့ပါဘူး… အမှန်က ရုံးပတီသီး အရမ်းမနူးခင် ချရမှာပါ… သားက မနူးရင် မစားတာမို့နူးမှချဖြစ်တော့ နဲနဲတော့ချွှဲသွားပါတယ်….
အာလူးပြုတ်ထားတာကို ထောင်းပြီး ကြက်ဥအကာကို ဖယ်ထား အနှစ်လေးကို အာလူးရယ်ဆားရယ်ရောနယ်ပါတယ်… ကျော်တဲ့အခါ အခုလေးလုပ်ပြီး ကြက်ဥအကာနှစ်လေးထဲ ထည့်စိမ်ပြီး ကျော်လိုက်ရုံပါပဲ… အဆာမသွပ်တဲ့ လွယ်ကူလျင်မြန်တဲ့ အာလူးကတ်တလစ်ကျော်လေးပါ…
Sunday Menuလေးနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်နှိုးထလိုက်ပါတယ်… ဘလော့ကြွလာ မိတ်သဟာတို့မြိန်လျက်စွာသုံးဆောင်ကြပါရှင်….
Posted by တန်ခူး at 9:28 PM 8 comments:
အနုပညာသမားမို့ ပါလို့ 
ပုခုံးလေးတွန့် ရယ်ပစ်လိုက်ရုံနဲ့ 
မေ့ မထားနဲ့ ဦးကွယ်…။
တို့ စေတနာတွေ နားလည်တတ်ပါစေ
ရှေ့ မှာ ချောက်ရှိနေတာသိတဲ့အခါ
တို့ လဲမိန်းမ… မင်းလဲမိန်းမ… ပြီးတော့ သူလဲမိန်းမ
အချစ်လို့ များ ထင်ယောင်မမှားမိစေနဲ့ 
ဖြူစင်သန့် ရှင်းမွေးပျံ့ ကြိုင်သင်းတဲ့
တို့ အတတ်သိနေလို့ ပါကွယ်…။
(ခုတလော… မြန်မာပြည်ကရော... ဒီကပါ ကြားကြားနေရတဲ့ ကြိုးတန်းပေါ်လမ်းလျှောက်နေတဲ့ မိန်းခလေးတွေ ဒီကဗျာလေးများအမှတ်တမဲ့ ဖတ်မိလို့နစ်တော့မယ့်သူတို့ ဘ၀တွေအတွက် ကောက်ရိုးတမျှင်ဖြစ်ခဲ့ရင် မိန်းမတယောက်ဖြစ်တဲ့ကျွန်မပျော်ရွှင်ကျေနပ်မိမှာပါ)
Posted by တန်ခူး at 5:04 PM 11 comments: